Fanazavana Fohy Momba Ny Bokin’ i Môrmôna
Ny Bokin’ i Môrmôna dia rakitsoratra masin’ ny mponina tao Amerika fahizay, ary voasokitra tamin’ ireo takelaka metaly. Efatra karazana ny takelaka metaly voalaza ao anatin’ ny boky:
Ny Takelak’ i Nefia, izay roa karazana: ny Takelaka Kely sy ny Takelaka Lehibe. Navahana manokana ho an’ ny zavatra ara-panahy sy ny asa fanompoana ary ny fampianaran’ ny mpaminany iretsy voalohany, fa nanoratana indrindra kosa ny tantaram-piainan’ ny mponina voakasik’ izany ireto faharoa (1 Nefia 9:2–4). Hatramin’ ny andron’ i Môsià anefa dia mirakitra ihany koa ny zavatra misongadina sy manan-danja ara-panahy ny Takelaka Lehibe.
Ny Takelak’ i Môrmôna, izay famintinan’ i Môrmôna ny Takelaka Lehiben’ i Nefia, miaraka amin’ ny fanazavana maro. Mirakitra ny fanohizan’ i Môrmôna ny tantara koa izany sy ireo fanampin-tsoratra nataon’ i Môrônia zanany lahy.
Ny Takelak’ i Etera, izay mampahalala ny tantaran’ ny Jarèdita. Nofintinin’ i Môrônia io rakitsoratra io izay nanatsofohany ny fanazavany, ary natambany tamin’ ny tantara ankapobeny io rakitsoratra io araka ny lohateny hoe: “Ny Bokin’ i Etera.”
Ny Takela-barahina izay nentin’ ny olon’ i Lehia avy tany Jerosalema, 600 talohan’ i J.K. Ireo no nitahiry “ny boky dimin’ i Mosesy, … Ary koa ny rakitsoratry ny Jiosy hatrany am-piandohana…ka hatreo amin’ ny fiantombohan’ ny fitondran’ i Zedekia, mpanjakan’ i Joda; ary koa ny faminanian’ ny mpaminany masin” (1 Nefia 5:11–13). Andalan-tsoratra maro avy amin’ ireo takelaka ireo, izay mitanisa an’ i Isaia sy ny mpaminany hafa ao anatin’ ny Baiboly na tsy ao anatin’ ny Baiboly, no hita ao amin’ ny Bokin’ i Môrmôna.
Misy toko lehibe na fizarana dimy ambin’ ny folo ao amin’ ny Bokin’ i Môrmôna fantatra amin’ ny hoe boky, afa-tsy anankiray ihany, ary samy voatondro amin’ ny anaran’ ny mpanoratra azy avy ny tsirairay aminy. Ny ampahany voalohany (ny boky enina voalohany mifarana amin’ i Ômnia) dia fandikana avy tamin’ ny Takelaka Kelin’ i Nefia. Eo anelanelan’ ny Bokin’ i Ômnia sy i Môsià dia misy teny natsofoka antsoina hoe Ny Tenin’ i Môrmôna. Io teny natsofoka io no mampitohy ny rakitsoratra voasokitra tamin’ ny Takelaka Kely amin’ ny famintinan’ i Môrmôna ny Takelaka Lehibe.
Ny ampahany lava indrindra, manomboka amin’ i Môsià ka hatramin’ i Môrmôna toko 7, dia fandikana ny famintinan’ i Môrmôna ny Takelaka Lehiben’ i Nefia. Ny ampahany farany, manomboka amin’ i Môrmôna toko 8, ka hatramin’ ny faran’ ny boky, dia soratra nosokirin’ i Môrônia, zanakalahin’ i Môrmôna, izay rehefa avy namarana ny tantaram-piainan-drainy, dia nanao ny famintinana ny rakitsoratry ny Jarèdita (na ny Bokin’ i Etera) sy nanampy ireo fizarana fantatra amin’ ny hoe ny Bokin’ i Môrônia tatỳ aoriana.
Nandritra na tokony ho tamin’ ny 421 taorian’ i J.K. no namehezan’ i Môrônia izay mpaminany sady mpahay tantara farany tamin’ ny Nefita, ny rakitsoratra masina sy nanafenany izany ho an’ ny Tompo mba hampisehoana izany amin’ ny andro farany araka ny efa nampilazain’ ny feon’ Andriamanitra mialoha tamin’ ny alalan’ ireo mpaminany fahiny. Tamin’ ny 1823 taorian’ i J.K., dia nitsidika ny mpaminany Joseph Smith io Môrônia io ihany, izay olona natsangana tamin’ ny maty, ka nanolotra azy tatỳ aoriana ireo takelaka voasokitra.
Momba ity fanontana ity: Misy teny diso vitsivitsy ao anatin’ ny lahatsoratra tamin’ ny fanontana ny Bokin’i Môrmôna navoaka tamin’ny teny Anglisy teo aloha. Ity fanontana ity dia ahitana ireo fanitsiana izay hita fa mifanaraka amin’ny lahatsoratra tany am-piandohana sy tamin’ny fandikana voalohany nataon’ny mpaminany Joseph Smith.